UJuan Manuel Anguita kutshanje undinike inguqulelo entsha yesi sicelo ebesikade siyikhuthaza, kodwa elo xesha belishiye iingxaki ezithile kuhlobo olutsha lwe-Excel. Ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu, kodwa kusebenza kakhulu. Kuya kufuneka ufake inani lenqaku, ulungelelanise x, y, z; Ndibeke ...
Imveliso eyaziwayo kakhulu ye-Bentley yiMicrostation, kunye neenguqu zayo ezithe nkqo kumasebe ahlukeneyo obunjineli ngokugxininisa kuyilo lwazo zombini, ezamashishini, ezokwakha kunye nezobunjineli bezothutho. IProjectWise yimveliso yesibini yeBentley edibanisa ulawulo lolwazi kunye nokudityaniswa kwamaqela omsebenzi; kwaye sele ikhutshiwe ...
Zobunjineli, Microstation-Bentley, Ukuprinta kokuqala
Iplagi ye-ArcGIS ye-AutoCAD ESRI ikhuphe isixhobo sokujonga idatha ye-ArcGIS kwi-AutoCAD, exhomekeke njengethebhu entsha kwiRibhoni kwaye ayifuni ilayisensi ye-ArcGIS okanye inkqubo efakiweyo. Isebenza ngeenguqulelo ze-AutoCAD 2010 ukuya kwi-AutoCAD 2012, khange bathethe nto nge-AutoCAD ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, ezintsha
Abasebenzisi be-GIS bahlala becelwa umngeni ekuguquleni idatha ye-CAD kunye neenkqubo zesalathiso. Sitsho ngomceli mngeni kuba, kwiimeko ezininzi, olu tshintsho lubandakanya umsebenzi oqinisekileyo osivumela ukuba sigcine ulwazi oluninzi kangangoko kunokwenzeka kwidatha yoqobo. Kuyathakazelisa ukuba oku kusebenza kuza ne Microstation, kodwa ngokuqinisekileyo kwabo ...
Le Khosi yesiKhokelo esiKhawulezileyo, enokuthengwa kwaye ifunyenwe emnyango wendlu ngexabiso le-US $ 34.99. Imveliso ibandakanya: Inkqubo epheleleyo ye-AutoCAD 2D kunye ne-3D eneevidiyo ezingama-477 zesikhangeli esenziwe lula ukujonga izihloko Yonke imizekelo yekhosi yeefayile ezili-17,000 zemizobo ...
Namhlanje kukho iikhosi ezininzi zasimahla ze-AutoCAD kwi-Intanethi, ngale nto asizimiselanga ukuphinda umzamo osele wenziwe ngabanye, kodwa endaweni yoko kukuxhasa igalelo elibonisa isithintelo phakathi kwekhosi echaza yonke imiyalelo kunye nenyani yomsebenzisi owakha wazi imiyalelo ayazi ukuba iqale ngaphi. ...
Unyaka uqalile ngamandla amakhulu ziinkampani ezinikele kwindawo yoqeqesho, sisebenzisa eli nqaku ukukhuthaza ezinye zezinto ezintsha ezikhoyo kulo mbandela, kwaye ngequbuliso sinika ukuqhubeka kwemveliso, kabani esithetha ngayo ukusukela oko kunyaka ophelile; ngokoluvo lwethu olwahlukileyo ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, ezintsha
KwiMicrostation iibhloko zibizwa ngokuba ziiseli (iiseli) nangona kwezinye iimeko ndivile ukuba zikwabizwa ngokuba ziiseli. Kule nqaku siza kubona indlela yokwenza kunye nokucinga okubenza bahluke kwiibhloko ze-AutoCAD. 1.Zisetyenziselwa ntoni iiseli? Ngokungafaniyo ne-GIS, apho isimboli inamandla isuka ...